The Bull of Wall Street | Vaovao momba ny dia
Raha mikasa ny hitsidika ny New York City ianao ato ho ato, dia mety manana toerana maro ao an-tsaina hotsidihina ary hijanona ao amin'ny fitadidianao. Azo antoka ihany koa fa haka sary maro izay tianao ho hitanao rehefa miverina ianao, na dia ny sary tsara indrindra aza dia ireo mijanona ao amin'ny retina-masonao ary voarakitra ao amin'ny fitadidianao. Fantatrao ve ny Bull of Wall Street?
Androany aho te hiresaka aminao momba ny toerana iray izay tsy azonao adino amin'ny fitsidihanao, satria matetika ireo mpizahatany maka sary maro amin'ity toerana ity, dia eo afovoan'ny foibe ara-bola ihany koa izy io. Te hilaza aminao momba ny Bull of Wall Street tsara tarehy aho.
1 Ny omby any Wall Street
2 Ny tantaran'ny omby
3 Izy io dia tandindona ary tian'ny olona sary ny tenany
4 Mila jerena izany
Ny omby any Wall Street
Toa saika handoa vola ilay omby, mampita hery sy herim-po. Fantatra amin'ny anarana hoe Bull of Wall Street izy io satria eo amin'ny faran'ny Broadway, ao amin'ny Bowling Green Park, no misy azy. Dingana vitsivitsy monja dia manana ny fijanonana metro handalovan'ny tsipika 4 sy 5 ianao ary azonao atao koa ny mahita ny fijanonan'ny sambo izay hitondra anao any amin'ny Sarivongan'ny fahalalahana. Amin'izany no tiako hilazana aminao fa raha te-hitsidika ny Bull of Wall Street ianao dia tsy hanana olana amin'ny fankafizana an'io sary sokitra io any New York.
Io ilay Arturo Di Italiana Modica izay nanao ny sary sokitra varahina izay milanja mihoatra ny telo taonina ary mitentina 300 XNUMX dolara ny vidiny. Izy io dia mariky ny fanambinana sy ny fanantenana ao aorian'ny krizy tahiry izay nijalian'i New York taorian'ny taona 1986 ary izany no antony nilalaovany ny teny hoe - Charging Bull- izay midika fiakaran'ny vidin'ny tsena. Ho an'ny sasany, ny omby dia maneho ny herin'i Etazonia, ny herisetran'ny maso ivoho ny tsena ary farany, omby iray izay mandrakotra ny herimpon'ny Amerikanina. Fa ny zava-misy dia afaka mahatsapa ny olona tsirairay fa ny omby dia midika zavatra iray na hafa.
Tamin'ny Noely 1989 rehefa nanapa-kevitra ny Italiana ny hanome ity sary sokitra ity any New York City Ary nataony izany nefa tsy nanontany tamin'iza n'iza ary tsy nangataka alalana, ka izay azo heverina ho fanimbazimbana dia noheverina ho asa malala-tanana ary manana lanja ara-panoharana be dia be. Noho izany, nahafa-po ny New Yorkers, dia nafindra toerana. Ity ny tantara.
Ny tantaran'ny omby
Iray amin'ireo tranonkala nalaina sary fatratra tao New York City ny sary sokitra omby ao Wall Street lehibe any Lower Manhattan amin'ny Broadway. Tamin'ny voalohany, Ity sary sokitra ity dia noforonina, araka ny efa noresahiko tamin'ny teboka teo aloha avy amin'i Arturo Di Modica ary niseho tamin'ny 15 septambra 1989 teo alohan'ny New York Stock Exchange amin'ny Broadway.
Nandositra tany amin'ny fiarovana ny Stock Exchange i Di Modica ary hitany fa manana minitra vitsy handosirana izy rehefa avy nametraka ilay omby tany amin'io toerana io avy tao amin'ny studio-ny tany Soho, satria tsy te hangataka fanekena izy hametraka ny sary sokitra izay fanomezana, ireo fanomezana! tsy tokony ampitandremana izy ireo! Tonga tamin'ny marainan'ny 15 septambra izy ary hitan'i Di Modica fa teo amin'io toerana io no nametrahana hazo krismasy ny iray andro lasa teo, noho izany dia kivy ny lalan'ny fandosirany ary navela teo ambanin'ilay hazo ilay omby, toa fanomezana Krismasy avy amin'ilay artista New York City.
Di Modica nanao ny omby ho fankalazana ny finiavana sy ny fanahin'ny vahoaka amerikana, indrindra taorian'ny fianjerana Wall Street tamin'ny 1986. Saingy nesorina ilay sary vongana tamin'ny andro nananganana azy io. Saingy faly ny olona tamin'io fanomezana io ary nanapa-kevitra ny hametraka izany amin'ny toerana misy azy ankehitriny izy ireo. Mpanakanto Arturo Di Modica no nifidy ny omby ho mariky ny herin'ny vahoaka amerikana. Hatramin'izao dia mbola mariky ny Amerikanina maro no tia mampiseho mpizahatany.
Izy io dia tandindona ary tian'ny olona sary ny tenany
Ny olona rehefa mandeha mankamin'ny omby dia alaina sary eo aloha na any aoriana. Saingy misy lafiny iray mahaliana ary izany dia ny ankamaroan'ny mpizahatany manatona ilay omby dia tia maka sary ny tenany eo akaikin'ny vatan'ny omby ary manosotra azy ireo koa.
Betsaka ny olona mieritreritra - na manamarina ny tenany - fa ny fanosehana ny vatan'ny omby dia vintana tsara. Matetika ireo mpizahatany avy any Amerika atsimo sy Azia no mazoto indrindra hikapoka ny vatan'ny omby.
Tena mila manana finiavana hikosotra ny zotram-bantotr'omby amin'ny rantsantananao ianao, satria rehefa ririnina any an-tanànan'ny New York dia ambany dia ambany ny mari-pana, afaka mandatsaka lanezy izy, ary ny fanaovana ny takela-by varahina dia hahatonga anao hatsiaka kokoa. Na dia misy aza ireo manao izany amin'ny fonon-tànana. Na izany na tsia, ny fikasihana zavatra izay kasihan'ny tsirairay dia tsy tokony hadio loatra, ka raha te hanao an'io koa ianao, ny zavatra tsara indrindra hatao dia ny manasa tanana avy eo.
Mila jerena izany
Tahaka ny toerana malaza sy malaza any New York, ny fitsidihana ny Bull of Wall Street dia tsy maintsy jerena fa tsy azonao adino ny làlan-kalehanao. Izy io dia iray amin'ireo sarivongana fanta-daza eran'izao tontolo izao ary izany no mahatonga isan'andro isan'andro milahatra maka sary miaraka amin'ilay omby avy eo aloha mba ho hita tsara ny loha, eo amin'ny sisiny mba ho hita daholo ny famirapiratany, na avy any aoriana mba hahitana tsara ny zana-tsipikan'ny omby amin'ny sary.
Ka raha tsy maintsy mitsidika an'i New York ianao dia aza misalasala mitsidika ny zorony rehetra, ny fivarotany, ny trano fisakafoanana misy azy, mankafy ny namanao, olona ao amin'ny fianakavianao raha manana amin'ity faritra ity ianao, mahita toerana vaovao, mankafiza ny mponina ao aminy ... ary ambonin'izany rehetra izany hitsidika ilay omby, iza no tena mety ho eo rehefa tonga ianao, miandry am-paharetana anao hitsidika azy ary haka sary miaraka aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Ny Bull of Wall Street
Ny morontsiraka tsara indrindra any Cantabria